Apple isku dayi maayo inay hesho McLaren, way beeniyeen | Waxaan ka socdaa mac
Maanta waxaa jiray buuq weyn adduunka oo dhan Apple Car iyo wararka xanta ah ee todobaadyada sheegayay in Apple ay sameysay "wax fiican oo nadiif ah" oo ay bilawday cilmi baarista iyo horumarinta mashruuca titan ee la xiriira gaariga Apple Car.
Si kastaba ha noqotee, warka maanta saxaafadda u booday wuxuu noqday in shirkadda leh tufaaxa la qaniinay ay noqon karto Iskuday inaad hesho McLaren weynMacluumaadka saacado yar gudahood ay beeniyeen McLaren lafteeda, oo aan doonaynin wararka sidan oo kale ah inay waxyeelo ugu gaysato sinnaba, xataa kaba sii daran markay run ahayn.
Warkan waxaa siidaayey maanta majaladda Financial Times lafteeda, taas oo xaqiijisay, kadib markii ay soo baxeen wax intaa ka badan oo aan ka yarayn seddex qof oo aad ugu dhow McLaren, in ay ahayd wadahadalo dhowr bilood ka hor lala galay shirkadda ka socota Cupertino. Horaa loo yidhi Qiimaha McLaren ee hadda waa qiyaastii € 1750 bilyan, waa jaantus ay Apple si fudud uga gudbi karto waana marka loo eego Beats waxay u timid inay bixiso tirada qabow ee ah 2700 billion euros.
Si kastaba ha noqotee, dhowr saacadood ka hor waxay ahayd McLaren lafteeda oo u soo baxday inay beeniso wararka ku jira New York Times oo leh:
“Waxaan xaqiijin karnaa inaanan wadahadal kula jirin shirkadan maalgashi suurtagal ah«
Waan arki doonaa waxa ay xantaasi ku saabsan yihiin iyo hadday ugu dambeyn run yihiin iyo in kale mana aha markii ugu horreysay ee markii hore war la faafiyay la beeniyay aakhirkiina run noqday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Apple isku dayi mayso inay hesho McLaren, way beeniyeen
Sidii ay tufaax u iibsatay shinnidii mayanta ahayd